ကၽြန္းေပၚကလြတ္ေအာင္ဘယ္လို ႀကိဳးစားရမလဲလို႔ ပရိသတ္ေတြကို ပေဟဠိေတြထုတ္လိုက္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ယဥ္လတ္ – Cele Snap
ပရိသတ်အချစ်တော် ဖိုက်တင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လတ်ကတော့ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှ ာကနေတဆင့် သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ နေ့စဉ်ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ပရိသတ်တွေကို ပဟေဠိလေးတစ်ခုနဲ့ ဉာဏ်စမ်းလာခဲ့ပါတယ် ။ကျွန်းစောင့်နတ်သမီး . . အကယ်၍ သင်ဟာသင်္ဘော တစ်စီးနဲ့ ရွက်လွှင့်လာသူဆိုပါစို့ . . ဖြစ်ချင်တော့ လေပြင်းမုန်တိုင်းမိပြီး ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ် ရောက်သွားတယ် .. အဲ့ကျွန်းလေးကို စောင့်တဲ့ နတ်သမီးလေးတော့ရှိတယ် .. ဒါမဲ့ သင်မမြင်ရဘူး..သင့်ကိုတော့ စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ် .. စားစရာတွေလဲ ရှိမယ်ကွာ .. သင် အဲ့ကျွန်းပေါ်မှာဆက်လ က်ရှင်သန်မလား ?အိမ်ပြန်ဖို့ ရတဲ့နည်းနဲ့ ကြိုးစားမလား? ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကို မေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ ကျွန်းပေါ်ကနေလွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လို့လည်း ပရိသတ်တွေကို ဉာဏ်စမ်းထာ းပါသေးတယ် ။ အကယ်လို့ကျွန်းစောင့်နတ်သမီးလေးက ယဉ်လတ်သာ ဆိုရင်ကျွန်းမှာပဲ နေမှာလို့ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေ က မှတ်ချက်တွေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ ယဉ်လတ်ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရော .. ဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲ အဖြေလေးတွေရေးပေးခဲ့ပါဦး ။lapyophyu
ကျွန်းပေါ်ကလွတ်အောင်ဘယ်လို ကြိုးစားရမလဲလို့ ပရိသတ်တွေကို ကဟေဠိထုတ်လိုက်တဲ့ ယဉ်လတ်ပရိသတ်အချစ်တော် ဖိုက်တင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လတ်ကတော့ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ နေ့စဉ်ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ပရိသတ်တွေကို ပဟေဠိလေးတစ်ခုနဲ့ ဉာဏ်စမ်းလ ာခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်းစောင့်နတ်သမီး . . အကယ်၍ သင်ဟာသင်္ဘော တစ်စီးနဲ့ ရွက်လွှင့်လာသူဆိုပါစို့ . . ဖြစ်ချင်တော့ လေပြင်းမုန်တိုင်းမိပြီး ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ် ရောက်သွားတယ် .. အဲ့ကျွန်းလေးကို စောင့်တဲ့ နတ်သမီးလေးတော့ရှိတယ် .. ဒါမဲ့ သင်မမြင်ရဘူး..သင့်ကိုတော့ စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ် .. စားစရာတွေလဲ ရှိမယ်ကွာ .. သင် အဲ့ကျွန်းပေါ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်မလား ?အိမ်ပြန်ဖို့ ရတဲ့နည်းနဲ့ ကြိုးစားမလား? ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကို မေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။အဲ့ဒီ ကျွန်းပေါ်ကနေလွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လို့လည်း ပရိသတ်တွေကို ဉာဏ်စမ်းထားပါသေးတယ် ။ အကယ်လို့ကျွန်းစောင့်နတ်သမီးလေးက ယဉ်လတ်သာဆိုရင်ကျွန်းမှာပဲ နေမှာလို့ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေ က မှတ်ချက်တွေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ ယဉ်လတ်ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရော .. ဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲ အဖြေလေးတွေရေးပေးခဲ့ပါဦး ။lapyophyu lapyophyu